အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ Archives - Page 20 of 28 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ရင်သားကြီးထွားစေတဲ့လိမ်းဆေးတွေက တကယ်ရော ထိရောက်ရဲ့လား? ရင်သားကြီးထွားစေတဲ့ လိမ်းဆေးကြောငြာတွေ အရတော့ လိမ်းပြီး သိသိသာသာထူးခြားသွားတာတွေ့ရမှာပါ။ ဒီကြောငြာတွေလို လက်တွေ့မှာရောထိရောက်မှုရှိရဲ့လားဆိုတာ သိချင်ကြမှာပါ။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ ကတော့ ဒီလိမ်းဆေးတွေက အကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဟာကအမှန်လဲ? ရင်သားကြီးထွားဖို့ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် သိဖို့ဆိုရင် ရင်သားရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို အရင်သိထားဖို့လိုပါတယ်။…
ရင်သားပြုပြင် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း ရင်သား ပြုပြင်ခွဲစိတ်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုသမှုခံယူသူ သိပ်မရှိသေးပေမယ့် ပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဒီခွဲစိတ်ကုသမှုကို 1961 ခုနှစ်လောက်ထဲက စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ သိပ်အကျွမ်းတစ်ဝင် မရှိသေးတဲ့ ရင်သားခွဲစိတ်ကုသမှုအကြောင်းကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေ ကုသမှုခံယူလေ့ရှိလဲဆိုရင်- ရင်သားကင်ဆာ…
မိန်းကလေးများနဲ့တင်ပါးအလှ မိန်းကလေးတွေမှာ ခန ္တာကိုယ်အချိုးအစား လှပဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲမှာ တင်ပါးအလှလည်းပါဝင်ပါတယ်။ အလှအပကို ဦးစားပေးလာကြတဲ့ ခေတ်ထဲမှာ တင်ပါးပြည့်ချင်သူတွေ၊ အသက်အရွယ်ကြောင့် တင်ပါးလျော့တွဲလာသူတွေ၊ ခန ္တာကိုယ်အချိုးအစား မပြေပြစ်သူတွေအတွက် ဆီလီကွန်ထည့်ကာ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ တင်ပါးအလှပြုပြင်တဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဆီလီကွန်ထည့်ပြီး တင်ပါးအလှ…
“ကြွက်သားကြီးထွားဖို့ ပရိုတင်းဖြည့်စွက်စာသောက်ဖို့ လိုပါသလား?” ဘော်ဒီတောင့်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကြွက်သားထုတွေထွက်နေတဲ့ Gym က ဆရာတွေက Protein Supplement အကြောင်း ပြောပြကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို ကြွက်သားကြီးထွားဖို့ Protein ( အသားဓာတ်)လိုတယ်ဆိုတာ တော့ သေချာသလောက်ရှိနေပါပြီ။ ဘာကြောင့်လိုတာပါလဲ? Protein…
အမြန်ကိတ်ဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်သော အစားအစာများ… ခေတ်ကြီးကလည်း ခုတစ်မျိုး တော်ကြာ တစ်မျိုးနဲ့… “ဝမှ လှတဲ့ ခေတ်” လည်း ရှိခဲ့သလို…. “ပိန်မှ သွယ်မှ ချစ်တဲ့ ခေတ် “လည်း ရှိလေတော့ မောင်တို့ မယ်တို့ခမျာ ……
“ခံတွင်းရနံ့ဆိုးတွေကိုမေ့ပစ်လိုက်စေမယ့် နည်းလမ်း” ခံတွင်းရနံ့ဆိုးတွေဟာ သင့်ကို အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်နေမ်းဆိုရင် ဒီနည်းလမ်း ကိုဖတ်ထားလိုက်ပါ။ ၁)ခံတွင်းသန့်ရှငိးအောင်ထားပါ။ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းအဓိကက သွားနှင့်ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေးအားနည်းလို့ပါ။ သွားပုံမှန်တိုက်တဲ့အပြင်သွားကြားသန့်ရှင်းကြိုး( Dental Floss) လေးတွေ နဲ့စားပြီးတိုင်း သန့်ရှင်းသင့်ပါတယ်။ အစားစားပြီးတိုင်းသွားတိုက်ပေးပါ။ အစားစားပြီးတိုင်းပလုတ်ကျင်းပေးပါ။ ပိုးသတ်ဆေးပါသောဆေးရည်( Antiseptic solution)…
ခန္ဓာကိုယ်က မလိုလားတဲ့ အဆီတွေကို ဘယ်လိုမြန်မြန်ဖယ်ရှားမလဲ? ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရှိသင့်တဲ့နေရာတွေမှာ အလုံးအထည် အချိုးအဆစ်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရင် ဘာဝတ်ဝတ် ကြည့်ကောင်းနေမှာ အမှန်ပါပဲ ဒါပေမယ့် မလိုလားတဲ့နေရာတွေမှာ အဆီတွေပိုလျှံလာပြီဆိုရင်တော့ အဲ့အဆီတွေက ကြည့်ကောင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖျက်ဆီးမှာအမှန်ပါပဲ ဘယ်လောက်ဝိတ်ချချ အဆီတွေက ပျောက်မသွားပဲ…
” Detox water “ ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေတာတော်တော်ကြာပါပြီ အဲ့ဒါကြောင့် detox water နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာတွေတော်တော်များများရှာဖတ်ခဲ့တယ် detox water ဆိုတာကတော့ လွယ်လွယ်ရှင်းပြရရင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ လူတွေက စားချင်တာတွေစားကြတယ် သုံးချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲကြတယ် မိတ်ကပ် နှုတ်ခမ်းနီကစလို့ စီးကရက် အရက်အထိ…
ဗိုက်နဲ့ပေါင်အတွင်းပိုင်းရှိ လိမ္မော်ခွံကဲ့သို အဆီပိုများ သို့ လိမ္မော်ခွံလိုအထစ်ထစ်ထနေတဲ့ အဆီပြင်တွေဟာ အများအားဖြင့် အဆီစုရာနေရာတွေဖြစ်တဲ့ ပေါင်အတွင်းပိုင်း ခြေသလုံးနောက်ပိုင်း ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း လက်မောင်းအတွင်းသားတို့မှာရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအဆီတွေဟာ မမြင်ကွယ်ရာနေရာတွေမှာရှိနေတတ်ပေမယ့် လက်ပြတ်ဝတ်ချင်၊အတိုဝတ်ချင်ရင် တကယ်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးပါရစေ။ ၁) မျိုးရိုးကြောင့် ဝတဲ့မျိုးရိုးဟာ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်နှေးတာမို့…